I-SPY989 -I-OMG yokuKhangela okuFihliweyo kweKhamera yeBug kunye neOfisi, iKhaya, kunye neZithuthi | Izisombululo ze-OMG
I-SPY989 -I-OMG yokuKhangela okuFihliweyo kweKhamera yeBug kunye neOfisi, iKhaya, kunye neZithuthi
Ubuchwephesha bokuchasana noKhangelo, i-Bug Detector, i-RF Detector, i-Detector ye-Camera efihliweyo, i-Camera Finder ye-Wireless Audio Bug Camera Detector
I-SPY989 sisixhobo esiphathwayo esenzelwe ukukhangela iikhamera zokuhlola (ezifihliweyo njengezinto ezahlukeneyo zangaphakathi) ngaphandle kokuba zivuliwe okanye zivaliwe. Isixhobo asikwazi ukubona iikhamera ezinentambo kuphela, kodwa kwanezo zingenazingcingo ezisebenzisa izinto zokuhambisa ezinakho ukuthumela ulwazi kumgama ukusuka kwiimitha ezi-5 ukuya kwezi-10.
Umgaqo wokusebenza usekwe kwimpembelelo ye-flare eguqukayo. Isixhobo sikhupha ukukhanya kwaye sifumana ukukhutshwa okubonisiweyo (kubandakanya neefilitha ezibonisiweyo ezivela kwiikhamera zokuhlola). Kuba ukuqaqamba kwesibane esibonisiweyo kwiilensi zekhamera kuphindaphindwe kaninzi kunokubonakaliswa kwezinye izinto, yiyo loo nto ukumisela indawo yekhamera kulula.
Umgaqo osisiseko wokufumana iikhamera zokuhlola kukuba uphando kufuneka lwenziwe kwindawo apho abantu banokufaka khona ikhamera yokuhlola. Ezona ndawo zibalulekileyo kufakelo lwekhamera ziindawo ezivumela ukujongwa ngokulula kweendawo zokusebenza, indawo zokuphumla (izitulo, iisofa, njl.njl.) Kunye neminyango. Ikhamera inokufakwa kwindawo engenamngxuma yesilingi emiselweyo, kwiikona zesakhiwo, i-shaft yokungenisa umoya, izinto zefanitshala (ikhabethe, i-mezzanine, njl.njl.) iikhamera. Ukuchongwa kwekhamera enye okanye ezimbini zevidiyo akufuneki kube sisizathu sokujonga igumbi licocwe ngokupheleleyo. Kuyimfuneko ukujonga zonke iindawo apho ukurekhodwa okufihlakeleyo kunokwenziwa khona ukuze uqiniseke nge-100%.
Ukujonga ukuba yeyiphi i-flare oyibonayo-hlola iilensi zekhamera okanye ubonakalise umphezulu ogudileyo (umz. Iglasi okanye isipili) -unokushenxa ecaleni kancinci kwaye uqhubeke nokujonga indawo enye nesixhobo esisebenzayo. Kule meko i-flare elula iyanyamalala, iyatshintsha okanye iyitshintshe kakhulu amandla ayo. Nangona kunjalo, indawo eqaqambileyo yeelensi zekhamera zihlala kwindawo enye kwaye kukho utshintsho oluncinci kumbane wokuqina de uhlale ekutshoneni kwekhamera.
Kuya kufuneka ugcine engqondweni ukuba owona mgama usebenza ungekho ngaphezulu kweemitha ezili-10 kwaye ikhamera inokufunyanwa kuphela ngaphakathi kuluhlu lokugubungela. Ngenxa yoko, kuyacetyiswa ukuba kugcinwe eyona ndawo ikrokrisayo kwiindawo ezahlukeneyo.
* Fumanisa imiqondiso ye-elektroni yemagneti (RF) ekhutshwa sisixhobo ekujoliswe kuso
* Fumana umfanekiso welensi yekhamera yephini
* Fumana imiqondiso ye-infrared ekhutshwa ziikhamera
* Fumana iikhamera zemingxunya evaliweyo
Sebenza ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-12 emva kokuba uhlawuliswe ngokupheleleyo
1. Isixhobo sokulahla isixhobo esingenazingcingo okanye iTracker sifakiwe kwiiNdawo zeMoto nase-Ofisini nakwiNdibano zoThethwano ngeShishini;
2. Iselfowni yakho buqu ilahliwe okanye uziphathe ngendlela "engaqhelekanga";
3. Ukhuseleko / Ukukhuselwa kokukhangelwa kwezindlu zangasese zehotele, iihotele, amagumbi okuhlambela, amagumbi okunxiba, iZikolo zokuzonwabisa, ukuJongwa kweZikolo, iZibonelelo zeMikhosi, njl .;
4. UkuKhangelwa okuFihliweyo kweGPS kwiiMoto zokuQasha, iiMoto eziSetyenzisiweyo.
Imodi yeAlarm: isandi sokudibanisa infrared
Ukufunyanwa kwebhendi yamaza: I-10-3000 (MHz)
Uluhlu olusebenzayo: I-5-10 ixhomekeke kubungakanani besiginali yomthombo wokukhanya (m)
Umbane wokusebenza: I-5 (V)
Ubume be sicelo: igumbi lenkomfa yehotele, nayiphi na indawo okrokrela kuyo
yokuqinisekisa: I-CE / ROHS
Imiboniso eyodwa: Ukuphazamisa iAlarm, Ukungena manzi / ukuHlela kweMozulu
ukusetyenziswa: umhloli wekhamera yokuhlola
Yobungakanani: 108 * 75 * 34mm
Ixesha lokusebenza: iiyure 12
Umgama wokufumanisa umqondiso we-RF: I-GSM: 0.5-3M; 3G / 4G: 0.2-1M; WiFi: 0.1-1M
Uluhlu lokujonga amaza e-IR: 750-1000nm
Umgama wokubona we-IR: I-1-10m (kuxhomekeke kumandla omthombo wokukhanya)
Laser Isalathisi amandla: Iklasi II 1mw
Ukujongwa kweliso: Ubukhulu be-5x
Ukutshaja ujongano: Uhlobo lwe-DC 5V1A C
Ukusinda okushiyekile: 215G
Ubunzima bokuqala: 360G
612 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-15 Namhlanje